Dip namatidza Machine
Edge chisimbiso Machine
boka redu ine 5 madhipatimendi, Sales, R & D, Q & C, Production uye Finance dhipatimendi. Ane simba R & D dhipatimendi, rimwe gore, tichaita kuitisa kumarudzi kuongororwa uye ndiwedzere chigadzirwa yedu.
Nemhaka kuitwa chikwata chedu, tiine goho redu pane yakakwirira yakati sandara, unhu hwedu mumwe yakanakisisa pasi pose. Zvino tava kupfuura mhepo kuwedzera mugodhi nokutengesa mu China.
Changzhou Rongjiu Machinery Co., Ltd hwagadzwa muna 2011, uye iye zvino ane mavanga vaviri Rongjiu uye AOKS. The kambani zvikurukuru inotaurawo design, gadzira kumusika mishonga yakaita cheni
kutaipa mhepo kuwedzera miseve, Tile mhando mhepo kuwedzera miseve, kupfuura pfungwa mhando mhepo kuwedzera miseve, kuchengeteka stirrup mhepo rokuwedzera yakatarwa uye zvichingodaro.
Pashure pemakore mashomanana kukura, kambani zvino ane zvinopfuura 3,000 mativi metres chirimwa, pamwe kwenyika kubudiswa nzvimbo, CNC lathes, cylindrical nokugeda michina yakasiyana hukuru uye nounyanzvi gadzira equipments.Then kambani zvino anova indasitiri mutungamiri wayo wepagore goho ukoshi richisvika anenge mamiriyoni 10. Chii chinonyanya kambani yedu kunoita kuramba kuedza kupa anonzwisisa uye sayenzi kuvandudzika kune womukati mamiriro uyewo gadzira rikurumidze chezvinhu, achivaita Kunogara, hwakavimbika uye yakatsiga. Panguva ino kambani iri vakazvipira muchiso pakuvaka uye kusimudzirwa, uye anokanda pa kupa vatengi pamwe chemhando yepamusoro zvigadzirwa kusangana zvavo munhu zvichienderana zvavanoda.
Tinoita zvipikirwa yedu kupa vomuzana kirasi unhu uyewo vakarongeka uye yepamusoro mabasa kuitira kuti tirambe kusimba mune boka. Tinosimbisa musimboti kwevanhu nezvatinovavarira, uye kukunda kubudirira kwedu kuedza zvakare. Uyewo tariro yedu huru kuti tinogona kugutsa vatengi edu ose, vawane takunda zvisamumirira pamwe uye kushanda pamwe chete vanhu kubva mumamiriro ose oupenyu kuumba munhu mangwana nani!